नेपालमा समेत धेरै बालबालिकाहरुको हातमा देखिन थाले फिजेट स्पिनर ।::KhojOnline.com
नेपालमा समेत धेरै बालबालिकाहरुको हातमा देखिन थाले फिजेट स्पिनर ।
साउन, काठमाडौं । औंलामा राखेर फननन घुमाइने एउटा सानो खेलौनाले अहिले विश्वमै ठूलो लोकप्रियता कमाइरहेको छ । नेपालमा समेत धेरै बालबालिकाहरुको हातमा देखिन थालेको यो खेलौनाको नाम हो, फिजेट स्पिनर ।
तनाव कम गर्न र एकाग्रता बढाउन सहयोग गर्ने विश्वासले गर्दा यसका प्रयोगकर्ताहरु बढेका हुन् । बच्चाहरुका लागि भने यो मनोरञ्जनको बस्तु पनि बनेको छ ।
प्लाष्टिक तथा मेटलयुक्त यस्ता स्पिनर बजारमा विभिन्न रङ्ग तथा डिजाइनमा किन्न पाइन्छ । नेपाली बजारमा यस्ता स्पिनरको मूल्य न्युनतम एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्नेगर्छ । विदेशमा भने लाखौं रुपैयाँसम्मका स्पिनर पाइन्छन् ।
कसरी खेलिन्छ फिजेट स्पिनर ?
गोलाकार स्पिनरको बीचमा एउटा रिङ्ग हुन्छ । साइडमा तीनवटा प्वाल हुन्छन् । सोही तीन प्वालमध्ये एउटामा औंला राखेर यसलाई घुमाइन्छ । त्यसरी घुमाउँदा स्पिनर नझरोस् भन्नका लागि अर्को एउटा औंला (बुढी औंला)ले सहारा दिइन्छ । यस खेलको विशेषता यति मात्रै हो । यसकै लागि अहिले बालबालिका मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
लत नबसाल्न सुझाव
बजारमा यसलाई एकाग्रता बढाउने र तनाव हटाउने सामग्रीका रुपमा प्रचार गरिँदै आएको छ । मनोचिकित्सकहरुले भने यो खेलौनामा लत बस्यो भने हानिकारक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालका बाल मनोचिकित्सक डा. अरुण कुवँरका अनुसार स्पिनर फिजेटको प्रभावकारीतालाई आजसम्म चिकित्सकीय विज्ञानले पुष्टि गरेको छैन ।
‘अधिकांश बच्चाहरुमा एकाग्रता नहुने समस्या बढी हुन्छ । तिनीहरुमा एकाग्रता कायम गर्न यस्ता खेलहरु उपयोगी हुनु स्वभाविक हो । तर यही कुरा लत बन्न गयो भने बच्चाहरुमा समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ,’ डा. कुवँरले भने ।
डा. कुवँरका फिजेट स्पिनरले पनि बालबालिकालाई केही समयको लागि रमाइलो महसुस गराउनुका साथै उनीहरुलाई पढाईलेखाईको तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ । तर त्यसो भन्दैमा यसैको पछि लाग्नु गलत हुने उनको ठहर छ ।
‘यदि कुनै बच्चा चकचके छ, एकै ठाउँमा बस्दैन र कुनै पनि कुरा ग्रहण गर्न समस्या हुन्छ भने उसलाई यसले एकाग्र हुन मद्दत गर्न सक्छ’, त्रि.वि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोजराज ओझाले भने । तर, त्यसो भन्दैमा यसैमा लत बसाउन नहुनेमा उनले पनि जोड दिए ।
फिजेट स्पिनरलाई अटिज्म अर्थात आफैमा हराउने विमारी वा एडीएचडी अर्थात एटन्सन डिफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिसअर्डरसित जोड्न पनि खासै उपयुक्त नहुने ओझाले बताए । उनले भने, ‘यसले बच्चालाई खुशी त देखाउला तर एडिएचडी कम गर्न भने कुनै भूमिका खेल्दैन ।’
कसरी भयो फिजेट स्पिनरको आविष्कार ?
द गार्जियन, द न्युयोर्क टाइम्स लगायतका विश्वचर्चित पत्रिकाहरुलाई आधार मान्ने हो भने फिजेट स्पिनरको असली आविष्कारक केमिकल्स इञ्जिनियर कैथरिन हेटिंगर हुन् । यद्यपि, उनीसित यसको पेटेन्ट नभएकाले उनलाई आधिकारिक मानिदैन ।
हेटिंगरले सन् १९९३ मै यस गेमको पेटेन्टको लागि निवेदन दिएकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई पेटेन्ट पनि मिलेको थियो । तर सन् २००५ सम्म पनि उनले यस गेम उत्पादनको लागि व्यापारिक सहयोगी नपाएपछि यो पेटेन्ट खारेज भएको थियो ।
हेटिंगरले एक अन्तरवार्तामा बताएअनुसार जब उनी इजरायल गएको बेला बच्चाहरुले पुलिसलाई ढुङ्गा हानेर मनोरञ्जन लिइरहेको देखिन् । त्यतिबेला नै उनमा बालबालिकाको हातमा ढुङ्गाको सट्टा अरु नै बस्तु दिनुपर्ने सोच पलाएको थियो । त्यसैले उनले स्पिनर फिजेटको आविष्कार गरिन् । यस अर्थमा खेल बच्चाहरुको मनोरञ्जनका लागि विकास गरिएको थियो ।
आइत, साउन १५, २०७४ मा प्रकाशित
विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनाले क्रोएसियासँग लज्जास्पद हार व्यहोरे
असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनाले क्रोएसियासँग लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ । यससँगै लियोनल मेस्सीको टिम समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा बढेको छ । क्रोएसिया भने समूह डीबाट नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ । बिहीबार भएको खेलमा क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई ३-० ले पराजित गरेको हो । धेरै अर्जेन्टिना...
म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका सागर थापासहित ६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिए
काठमाडौं । म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका सागर थापासहित ६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बिहीबार सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, सन्दीप राई, रितेश थापा, विकास...
विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबल, साथमा नेपाली समयअनुसार खेल तालिका
जेठ, काठमाडौं । विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबलमा सामेल हुन ३२ देश तयारी अवस्थामा छन् । जेठ ३१ गते राति पौने ९ बजे हुने उद्घाटन खेलदेखि असार ३१ गते हुने फाइनलसम्म नेपाली फुटबल समर्थकलाई पनि विश्वकपको माहोलले तान्नेछ । रसियाका विभिन्न ११ सहरका १२ रंगशालामा खेल हुनेछ...
युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले कार पाए
जेठ, काठमाडौं । युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले कार पाएका छन् । उनले टाटा मोटर्सको टिगोर कार पाएका हुन् । टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले तीन वर्षका लागि सहकार्य घोषणा गर्दै कार उपहार दिएको हो । कारको सबै मूल्य कम्पनीले दिनेछ । यो कारको मूल्य २५ लाख...
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने घोषणा
वैशाख, जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । जनकपुरको बारहविगहा रंगभूमी मैदानमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दीपक गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा खेलकुदको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सुधार योजना ल्याउने बताए । सोही योजना अनुसार अागामी...
फागुन, काठमाडौं । आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन टुमा क्यानडालाई एक विकेटले हराउँदै नेपालले विश्वकप छनोट खेलको यात्रा तय गरेको छ । नेपालको यो संघर्षपूर्ण तर सनसनीपूर्ण जितको जताततै प्रशंसा छ । क्यानडाले दिएको १९५ रनको लक्ष्य नेपालले एक विकेट बाँकी छँदै पूरा गर्न सफल भयो । अन्तिम ओभरमा...